Warsaxaafadeed oo ay soo saareen xubno Somali ah oo ka tirsan xisbiga social demokradiga ee dalka Sweden
Warsaxaafadeed oo ay soo saareen xubno Somali ah oo ka tirsan xisbiga social demokradiga ee dalka Sweden.
110404 Sweden scandanevian
Waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Katarinholm shir labo maalmood uga socday Somalida ka tirsan xisbiga socialdemokradiga ee wadanka Sweden, shirkaas oo looga wadahadlaayey sida ay u sameyn lahaayeen urur guud oo mideeya Somalida degan wadankaan oo aaminsan fikrada socialdemokradiga ah.
Shirkaasi xubnaha ka soo qeeb galay waxay ka kala yimaadeen magaayinka ay ka koobantahay wadanka Sweden sida Stockholm, Gothenberg, Flen, Vanesrborg, Örebro, Katarinholm iyo kuwa kale oo aan halkan lagu soo koobi karin, xubnahii ka soo qeeb galay oo isu jiray aqoonyahano iyo xubno aad ugu firfircoon xisbiga socialdemokradiga ee wadankan Sweden oo hogaanka u haya xilgan aanu ku jirno.
Waxyaabaha halkaasi lagu falanqeeyey waxay ahaayeen afkaaro kala duwan oo dooda farabadan dhayiyey, waxaan ka mid ahaa sidatan:
In la isku af garto in la dhiso urur mideeya afkaarta waxqabadka xubnaha Somalida ee ka tirsan xisbiga socialdemokradiga ah.
In la doorto gudi ku meel gaar ah, kaasoo ka shaqeyn doona in shir weyn oo loo qabta xubnaha Somalida ee ka tirsan socilademokradiga.
Shirweynaha wuxuu kaloo isla gartay in wax laga qabto arimahaan:
In aan wadashaqeel la sameyno ururada bulshada Soomaaliyeed ee ka jira wadankan sida wax looga qaban lahaa dhibaatada haysata qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool yurub gaar ahaan wadanka Sweden.
In ururka noqdo dhaqdhaqaaq firfircoon waxna ku soo kordhiya siyaasada dalka Sweden.
In ururka mustaqbalka dhow ka shaqeeyo sidii afkaarta socialdemokradiga looga hergelin lahaa Soomaaliya.
In ururka ku dhaqaaqo daryeelka horumarinta arimaha Soomaaalida ee Sweden.
In ururka u noqdo dalad urur gaboleedka Soomaalida ee xisbiga socialdemokradiga ee dalka Sweden
In ururka si ku meel gaar ah u isticmaalo magaca ah SSUP (somali social unity party) oo aad ka akhrisan kartaa aqbaarta ururka kaasi oo adareeskiisu yahay http://www.ssup.org
Xubnihii halkaasi ka soo jeediyey doodaha dhaxalgalka ahaa waxaa ka mid ahaa:
1. Yaasiin Maaxi
2. Cabdirisaaq Aden
3. Iker Amin
4. Maxamed Xassan Dhaqaale
5. Ismahaan Cabdullahi Xassan
6. Barliin Maxamud Cadaawe
7. Cabdicasiis Cilmi
Waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa wariyayaasha Somaliweyn.com iyo Radio Ileys oo nooga soo diraayey qoraalo iyo wareysiyo farabadan oo aad dhawaan kala socondoontaan websideka uruka SSUP, somaliweyn iyo websideyada somalida.
Cabdullahi Xassan Dhaqaale
Barliin Maxamud Cadaawe
Waxii Faahfaahin iyo Su'aalaad waxaad kala soo xiriiri kartaa